“မ မှီ စ ကောင်း ……………မှီ စကောင်း ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “မ မှီ စ ကောင်း ……………မှီ စကောင်း ”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Mar 5, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 20 comments
ကိုေ ပါက်လက် ဆောင် အ တွေး ပါး ပါး လေး
မ ဟာ အံ့ ထူး ကံ သာ ဘု ရား ကြီး ကို အ ရင် ၀င် ဖူး ပြီး တော့ မြို့ ထဲ က မိတ် ဆွေ အိမ် ကို ၀င် ပြီး
မာကြောင်း သာ ကြောင်း လေး ပြော ပြီး ပြန်ခဲ့ ပါ တယ်။
အဲ ဒီ က အ ပြန် မှာ တော့ ကန် တော် ကြီး အမျိုး သား ဥ ယျာဉ် ကို ၀င် ပါ တယ်။
ဆိုင် ကယ် အပ် ခ ကျပ် ၅၀၀ ထုတ် ပေး တော့ ဆိုင် ကယ် လက် ခံ တဲ့ ကောင် လေး ကဆိုင် ကယ် တစ် စီး တစ် ထောင် လို့ ပြော ပါ တယ်။
ခါ တိုင်း ငါး ရာ ပါ ကွာ လို့ ပြော တော့ ဒီ နေ့ တ ရုပ် နှစ် သစ် ကူး နေ့ မို့ အထူး ဈေး လို့ ပြော ပါတယ်။
ရောက် လက် စ နဲ့ မို့ မ ထူး ဘူး ဆို ပြီး သူ ပြော တဲ့ ဈေး ကို ပေး လိုက် ရ ပါ တယ်။
ဒီ လို အဖြစ်မျုိး ကို မ န္တ လေး မှာ လဲ မကြာ ခဏ ကြုံ ရ ပါ တယ်။
အထူး သ ဖြင့် မ ဟာ မု နိ ဘု ရား ကြီး မှာ ပါ။
အ ခါ ကြီး ရက် ကြီး ရောက် တဲ့ အခါ တိုင်း ပုံ မှန် ယူ နေ ကျ ဈေး ထက် ပို တောင်း တတ် ပါ တယ်။
သာ မန် နေ့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ကျပ် သုံး ရာ က နေ အဲ့ လို နေ့ မျုိး ဆို ရင်
အော် တို မက် တစ် တစ် စီး ကျပ် ငါး ရာ ဖြစ် သွား ပါ တယ်။
ကျနော် တို့ မြန် မာ နိုင် ငံ က မြန် မာ့  ဆို ရှယ် လစ် လမ်း စဉ် နဲ့ ချီ တက် ခဲ့ တဲ့ ကာ လ က စ ပြီး အ ထွေ ထွေ ကျပ် တည်း ရှား ပါး မူ့ နဲ့ ကြုံ ခဲ့ ကြ ရ ပါ တယ်။
ဒီ တော့ လူ တိုင်း စိတ် ထဲ မှာ ရ တုန်း ယူ ထား မှ ဆို တဲ့ စိတ် ထား တွေ ကိန်း အောင်း နေ တာနှစ် ရှည် လ များ ကြာ ခဲ့ တော့ ဖြစ် သင့် လား မ ဖြစ် သင့် ဘူး လား သင့် တော် လား မ သင့် တော်ဘူး လား တောင် မစဉ်း စား နိုင် တော့ ပါဘူး။
အဲ တော့ လဲ ပွဲ လမ်း သ ဘင် လို အ ခါ ကြီး ရက် ကြီးလို မျုိး မှာ ဆို ရင် ပုံ မှန် ရောင်းေ န ကျ ယူ နေ ကျ ဈေး ထက် တက် ယူ ကြ တာ ထုံး စံ လို ဖြစ်နေ ပါ တယ်။
ဒါ ပေ မယ့် လည်း ဈေး တက် ပြီး သာ ယူ လိုက် တယ် ၀န် ဆောင် မူ့ က တော့ ပုံ မှန် ရက် ထက် တောင် မှ ညံ့  ဖျင်း လို့ သွား ပါ သေး တယ်။
လူ များ တယ် မ နိုင် ဘူး ဆို တဲ့ အ ကြောင်း ပြ ချက် နဲ့ ပါ။
တ နည်း ပြော ရ ရင် ကျ နော် တို့ ဆီ က လုပ် ငန်း ပိုင် ရှင် တွေ က
“၀န် ဆောင် မူ့ “ ဆို တဲ့ စကား လုံး ကို အ လေး အ နက် မ ထား ကြ တာ ပါ ဘဲ။
ကိုယ့် ဆိုင် ကို လာ အား ပေး တဲ့ ဖောက် သည် တွေ ကို “၀န် ဆောင် မူ့ “ နဲ့ ဆွဲ ဆောင် မှ ထာ ၀ ရ တည် မြဲ မယ် ဆို တာ ကို နား မ လည် တာ ပါ ဘဲ။
မြန် မာ ပြည် မှာ လုပ် သင့် လုပ် ထိုက် တယ် ဆို တဲ့ အ ရာ အား လုံး လမ်း နံ ဘေး က ဆိုင်း ဘုတ် တွေပေါ်မှာ
အိမ် နံ ရံ ပေါ်မှာ ကပ် ထား တဲ့ စာ ရွက် တွေ ပေါ် မှာ သာ ရှိ နေ တာ တော့ အ သေ အ ချာ ပါ ဘဲ။
လမ်း နံ ဘေး က ဆိုင်း ဘုတ် ကြီး တွေ မှာ
ဆိုင် နံ ရံ တွေ မှာ သ တိ ပေး စာ တန်း တွေ ဆောင် ပုဒ် တွေ ပေါင်း စုံ ကို
ချိတ် ဆွဲထား ကြ ပေ မယ့် လက် တွေ့ လက် နာ ကျင့် သုံး မူ့ က တော့ မ ရှိ သ လောက် ပါဘဲ။
ဆိုင် တစ် ဆိုင် ထောင် လိုက် မယ် အောင် မြင် လာ တယ် ဆို ရင် ၀န် ထမ်း တွေ နဲ့ ဘဲ လွှဲ ထား တတ် ကြ ပါ တယ်။
ကိုယ့် ဆိုင် ရဲ့ လို အပ် ချက် ကို ပြန် မ ကြည့် ဘဲ ငွေ သိမ်း ကောင် တာ မှာ ဘဲ ခပ် ခန့် ခန့် ကြီးထိုင် တတ် တာ က တော့ ဆိုင် အ တော် များ များ မှာ ဘဲ တွေ့ နေ ရ ပါ တယ်။
တစ် ခါ က ခ ရီး လမ်း ပန်း ဆက် သွယ် ရေး ခက်ခဲ တဲ့ နေ ရာ မှာ နေတဲ့ မိတ် ဆွေ တစ် ဦး မ န္တ လေးကို ရောက် လာ ပါ တယ်။
သူ က သူ့ အ မေ အ တွက် ဆောင်း တွင်း မှာ စီး ဘို့ က တ္တီ ပါ ဖိ နပ် လေး ၀ယ် သွား ချင် ပါ တယ်။
ဒါ နဲ့ ဘဲ နာ မယ် ကြီး ဖိ နပ် ဆိုင် တစ်ဆိုင် ကို ခေါ် သွား လိုက် ပါ တယ်။
သူ က လဲ ရောက် တုံး ရောက် ခိုက် မှာ လူ ကြီး စီး လို့ သင့် တော် တဲ့ အ ရောင်
သုံး လေး ရံ လောက် ၀ယ် သွား ချင် ပါ တယ်။
သူ့ အ မေ စီး တဲ့ ဖိ နပ် အရွယ် အစားက က နံ ပါတ် ( ၆) ဆိုဒ် ပါ။
စင် ပေါ် မှာ တင် ထား တာ အ နက် ရောင် တ ရံ ဘဲ ရှိ ပါတယ်။
နောက် ထပ် လို ချင် သေး တယ် ပြော တော့ အ ရောင်း ကောင် မ လေး က
သူ တို့ ရဲ့ စ တို ခန်း ထဲ ကို ၀င် ရှာ ပါ တယ်။
အ တော် ကြာ မှ ထွက် လာ ပါ တယ်။
ဒီ တစ် ရံ ဘဲ ကျန် တော့ တယ် ပြော တော့ မှာ ထား ရင် ဘယ် လောက် ကြာ မ လဲ လို့ မေး တော့ နှစ် ပါ တ် တော့ ကြာ မယ် လို့ ပြော ပါ တယ်။
သူ ကေ နာက် တစ် ရက် နှစ်ရက် နေ ရင် ပြန် မယ် ဆို တော့ လဲ
မ မှာ ဘဲ ပြန်လာ ကြ ပါ တယ်။
နောက် တစ် လ လောက် နေ တော့ သူ တို့ မြို့ က မိတ် ဆွေ တစ် ယောက်
မ န္တ လေး ကို လာ တာ နဲ့ ကြုံ တော့ သူ့ အ မေ အ တွက် ဖိ နပ် ၀ယ် ပေး ဘို့
မှာ လိုက် ပါ တယ်။
ဒါ နဲ့ ဘဲ အဲ ဒီ ဆိုင် ကို သွား ပြီး မိန်း မ စီး နံ ပါတ် ခြောက် သွား မေး တော့ ကုန် နေ တယ် ပြော ပါ တယ်။
ပြီး ခဲ့ တဲ့ လ က လာ ၀ယ် သေး တယ် နောက် နှစ် ပါတ် လောက် နေ ရ င် ရ မယ် ပြော သေး တယ် ကုန် သွား တာ လား လို့ မေး တော့
“ အဲ ဒီ က တည်း က ကို ထပ် မ မှာ ရ သေး တာ” လို့ ပြန်ဖြေ တော့ စိတ် တော့ နည်း နည်း လေ သွား ပါ တယ်။
ဆိုင် ကြီး တစ် ဆိုင် လုပ် နေ ပြီး လို အပ် ချက် ကို ဖြည့် မ ထား ဘူး လို့ တွေး မိ လို့ပါ။
ဒါ နဲ့ ဘဲ စ တိုး ဆိုင် လေး တစ် ဆိုင် မှာ သွား ရှာ လိုက် တော့ မှ တံ ဆိပ် မ တူ ပေ မယ့် အမျုိး အစား တူ တဲ့ ဖိ နပ် ကို ရ လာ ပါ တယ်။
ကပ် သပ် ပြီး ပြော မယ် ဆို ရင် တော့ ဖိ နပ် မှာ တယ် ဆို တာ ကိုယ် လို ချင် တဲ့
ဆိုက် တစ် ခု ထဲ မှာ လို့ ရ တာ မ ဟုတ် ဘူး ဆိုက် စုံ မှာ ရ တာ လို့ ဆို နိုင် ပါတယ်။
ဖိ နပ် လုပ် တဲ့ ဆိုင် တွေ က လဲ ဖိ နပ် မှာ တယ် ဆို ရင် ကိုယ် လို ချင် တဲ့ ဆိုဒ်ကို
သီး သန့် ယူ လို့ မ ရ ဘဲ ဆိုဒ် ပေါင်း စုံ မျှ ယူ ရ ပါ တယ်။
အဲ တော့ ကိုယ် လို ချင် တာ ရောင်း ကောင်း တဲ့ လူ အသုံး များ တဲ့ ဆိုဒ် ကို
သီး သန့်  မှာ လို့ မ ရ ဘဲ ဆိုဒ် ပေါင်းစုံယူ မှ ရ တယ် ဆို တဲ့ အ ကျပ် ကိုင် ပြီး ရောင်း တဲ့ စံ နစ် ဆိုးကို လဲ ပြင် သင့် တယ် လို့ ထင် မိ ပါ တယ်။
တစ် ခါ တစ် ခါ တွေး မိ ရင် အတွေး စ က မ ရပ် ချင် ပါ ဘူး။
၀န်ဆောင် မူ့ အ ကြောင်း တွေး မိ တော့ သိပ် မကြာ သေး ခင် က ပု ဂံ ခရီး ကို သ တိ ရ မိ ပြန်ပါ တယ်။
ကျ နော် နဲ့ ဓါတ်ပုံ ထွက် ရိုက် နေ ကျ သူ ငယ် ချင်း တစ် ယောက် နဲ့ သွား ခဲ့ ကြ တာ ပါ။
ပု ဂံ ဆို တာ နဲ့  ဘူ ဖေး ဆို တာ ကို သ တိ ရ မိ ပြန်ပါ တယ်။
ဘူ ဖေး ဆို တဲ့ ဟင်း တွေ အ များ ကြီး ချ ထား ပေး တဲ့ အထဲ က
ကိုယ် နှစ် သက် တာ ကိုကြိုက် သ လော က် စား နိုင် တဲ့ စံ နစ် က
ပု ဂံ ညောင် ဦး ဘက် က စ ခဲ့ တယ်လို့ ထင် မိ ပါ တယ်။
၂၀၀၄ ခု နှစ် ပု ဂံ ကို ဒု တိယ အ ကြိမ် ရောက် တော့ မြန် မာ ဘူ ဖေး ဆိုင်
ကို တ ကူး တ က ရှာ စား ခဲ့ ရ တာ ကို သ တိ ရ မိ ပါ တယ်။
အဲ ဒီ အချိန် တုံး က တော့ မြန်မာ ဘူး ဖေး ဆို တာ ဆန်း လဲ ဆန်း။
စ တင် စမ်း သပ် ပြီး ရောင်း ခါ စ ဆို တော့ ဆိုင် ရှင် တွေ က လဲ စေ တ နာ အပြည့် နဲ့ ပေါ့။
ကိုယ် က လဲ စား နိုင် တာ မ စား နိုင် တာ အပ ထား စား ပွဲ ပေါ် မှာ
ဟင်း ခွက် အပြည့် ချ ထား တာ ကြည့် ပြီး ပီ တိ တွေ ဖြစ် နေ တာကိုး။
အဲ တော့ ဒီ တစ် ခေါက် ပု ဂံ ကို ထပ် ရောက် တဲ့ အ ချိန် မှာ လည်း
စိတ် ထဲ မှာ ဘူ ဖေး ရော ဂါ ထ ပါ တယ်။
အဲ ဒါ နဲ့ ရောက် တဲ့ ည နေ ပိုင်း လော က န န္ဒာ ဘက် သွား မယ် ဆို ပြီး ထွက် လာ ကြ ပါ တယ်။
အဲ ဒီ ဘက် ရောက် မှ ဘူ ဖေး ဆိုင် ရှာ ပြီး ထ မင်း စား မယ် ပေ့ါ။
လော က န န္ဒာ သွား တဲ့လမ်း နား မှာ ဘူ ဖေး ဆိုင် တွေ ပေါ ပါ တယ်။
ဒါ နဲ့ ဘဲ လမ်း ဘေး မှာ ရှိ တဲ့ ဆိုင် ကယ် ကယ် ရီ သ မား ကို မေး ပြီး
သူ တို့ ကောင်း တယ် ပြော တဲ့ ဆိုင် မှာ ၀င် စား ကြ ပါ တယ်။
ထ မင်း စား မယ် ဆို ပြီး ခုံ မှာ ထိုင် လိုက် လို့ မ ကြာ ထ မင်း တွေ ဟင်း တွေ လာ ချ ပါ တယ်။
ထ မင်း က တော့ အ သစ် ချက် ထား လို့ ခပ် နွေး နွေး။
ဟင်း တွေ က အေး စက် စက်။
စား ရ တာ အ တော် စိတ် ပျက် သွား ပါ တယ်။
ဒါ ပေ မယ့် လည်း ကျ နော့် ရဲ့ဘူ ဖေး အိပ် မက် ကို စိတ် မ ကုန် သေး ပါဘူး။
နောက် တစ် ရက် နေ့ လည် စာ ထ မင်း စား မယ် ဆို တော့
ဘူ ဖေး ဆိုင် ကို ဘဲ ရောက်သွား ပါတယ်။
ကျ နော် ရောက် သွား ချိန် က နေ့  လည် တစ် နာ ရီ ကျော် နေ ပါ ပြီ။
အဲ ဆိုင် ကို ရောက် တော့ ကျ နော် တို့ သူ ငယ် ချင်း နှစ် ယောက် ဘဲ ရှိ ပါတယ်။
ကျ နော် တို့ ထိုင် ပြီး ခဏ နေ မှ မိ သား စု တစ် စု ၀င် လာ ပါ တယ်။
ကျ နော် တို့ စား ပွဲ ပေါ် ထ မင်း ဟင်း တွေ လာ ချ ပါတယ်။
ဟင်း ချို က တော့ နွေး ပေ မယ့် ကျန် တဲ့ ဟင်း တွေက အေး စက်လို့ နေ ပါ ပြီ။
ခဏ နေ တော့ ကြက်ခြောက် ကြော် လာ ချ ပေး ပါတယ်။
အဲ ဒီ ကြက် ကြော် က ပူ ပူ နွေး နွေး ဆို တော့ အ တော် စား ကောင်း ပါတယ်။
သူ ငယ် ချင်း နှစ် ယောက် ကြ က် ကြော် ရယ် ပုန်း ရည် ကြီး သုတ် နဲ့ ဘဲ ထ မင်း စား ကြ ပါ တော့ တယ်။
စား ကောင်း တော့ ကြက် ကြော် က ခ ဏ လေး နဲ့ ကုန် သွား တော့ တာ ပေါ့။
ထပ် တောင်း တော့ ပ ထမ တစ် ခါ လာ ချ။
နှစ် ခါ က နေ သုံး ခါ မြောက် မှာ တော့ စောင့် ရ မယ် လို့ ဖြစ် လာ ပါ တယ်။
အဲ တော့ ကျ နော် တို့ လဲ လာ ချ ပေး ထား တဲ့ အာ လူး ကြော်နဲ့ ဘဲ လက် စ သပ် လိုက် ပါ တယ်။
စား သောက် ပြီး တဲ့ အခါ ရေ နွေး ကြမ်း တောင်း တာ လာ မ ချ။
ကျ နော် သူ ငယ် ချင်း က ရေ စိမ်း မ သောက် ပါဘူး။
လမ်း ခရီး သွား ရင် ရေ နွေး ကြမ်း ဘဲ သောက် ပါတယ်။
ထပ် တောင်း တော့ရေ နွေး ကြမ်း မ ရ ပါ တဲ့။
ဒီ နေ့ အလုပ် များ နေ လို့ မ တည် ရ သေး ပါ တဲ့။
ဒီ နှစ်နပ် လဲ ကြုံ လိုက် ရော သူ ငယ် ချင်း နှစ် ယောက် ဘူ ဖေး ကို စိတ် ကုန် သွား ပါတယ်.။
ကျန်တဲ့ ရက် တွေ မှာ လက် ဖက် ရည် ဆိုင် မှာ ထ မင်း ဆီ ဆမ်း နဲ့ ကြက်ဥ ကြော် ဒါမှ မဟုတ် တရုပ် ဟင်း ရောင်း တဲ့ ဆိုင် မှာ ဟင်း တစ် ပွဲ မှာ ပြီး နှစ် ယောက် စား လိုက် ပါ တော့ တယ်။
တရုပ် ဆိုင် မှာ တော့ ထမင်း ရော ဟင်း ရော ဟင်း ချို ရော ပူ ပူ နွေးနွေး ပါဘဲ။
ကျ နော် မိတ်ဆွေ တစ် ယောက် က တော့ ခ ရီးသွား ရင် မြန် မာ ထ မင်း ဆိုင် စား လေ့ မ ရှိ ပါ တဲ့။
မြန် မာ ထ မင်း ဟင်း ဆို တာ က ကြို တင် ချက် ထား တာ ဖြစ် တော့ ဟင်း တွေ က ပူ ပူ နွေး နွေး မ ရှိ ပါ ဘူး တဲ့။
တရုပ် ထ မင်း ဆိုင် က တော့ ခု စား မှ ခု ကြော် ဆို တော့ စောင့် ရ တာက လွဲ ရင် အ ဆင် ပြေ တယ် လို့ ဆို ပါတယ်။
အဲ တော့ ကျ နော် တို့ မြန် မာ ထ မင်း ဆိုင် များ လဲ ခေတ် ပြောင်း သင့် ပြီ ထင် ပါ တယ်။
ရှမ်း ထ မင်း ပုံ စား ဆိုင်ေ တွလည်း ဟင်း ကို ကြိုတင် ချက် ထား ကြ တာ ပါဘဲ။
ဒါ ပေ မယ့် သူ တို့ က ဟင်း တွေကို ရေ နွေး ကန် ထဲမှာ ထည့် ထား တဲ့ အတွက်
ဟင်း တွေ က ပူ နွေး နေ တော့ စား ရ တာ ကောင်း ပါ တယ်။
မြန်မာ ထ မင်း ဟင်းဆိုင် တွေ ကို လဲ ဒီ စံ နစ် မျုိး ကျင့် သုံး မယ် ဆို ရင်
စာ သုံး သူ အတွက် အ တော် အ ဆင် ပြေ ပါ မယ်။
ကျ နော် တို့ မြ န် မာ ပြည် က အ ခု ချိန် မှာ နိုင် ငံ တ ကာ နဲ့ ရင် ဘောင် တန်း မယ် ဘာညာ ကွိ ကွ ကြွေးေ ကြာ် လာ ကြ တာ ကို ကြား နေရ ပါတယ်။
တ ကယ် လုပ် နိုင် ရင် တကယ် ကို ကောင်း လာ မယ့် ကိစ္စ ဆို တော့
အား ပေး ပါတယ်။
ဒါ ပေ မယ့် နေ ရာ တိုင်း နှီး ပါး လောက် မှာ
ဆိုင် ကို တိုး တက် အောင် ၀န် ဆောင် မူ့ ကောင်း အောင် လုပ် မယ့် အစား
ဗေဒင် ဆ ရာ တွေ နတ် က တော် တွေ ဘိုး တော်ေ တွ ပေး တဲ့ ယတြာ တွေ
အ ဆောင် တွေ ကို ဘဲ အား ကိုး နေ ကြ သလား တော့ မ သိ ပါ ဘူး။
အလုပ်ကို စံ နစ် တကျ နဲ့ ကြိုး စား ပမ်း စား လုပ် နေတဲ့ သူ က နည်း ပါးလာ ပါတယ်။
ဆိုင် မှာ လို အပ် ချက် ဖြည့် မယ့် အစား ဟို ဘိုး တော် ဒီ ဘိုးတော် ပေး တဲ့
ပန်း တွေ ပန်း အို တွေ ရှုပ်ယှက် ခပ် အောင် ထိုး ထား ပြန်ပါ တယ်။
တကယ် လက် တွေ့ အ လုပ် လုပ် ပြီး ဆို ရင် တော့
အခွင့် အ ရေး ရ ရင် ရသလို လှီး လိုက် မယ် ဆို တဲ့ စိတ် ဓါတ် ရှိ နေ တာ
ကိုယ့် ဖောက် သည် ရဲ့ လို အပ် ချက် ကို ပြည့် မှီ အောင် မဖြည့် နိုင်တာ
ရောင်း ကောင်း လာ ပြီ ဆို ရင် ၀န်ဆောင် မူ့ ကောင်း ကောင်း မေ ပး ချင် တော့ တာ တွေ ရှိ နေ သ မှ တော့
မှီ နိုင် ပါ အုံး မ လား လို့ ဘဲ မေး စမ်း ချင် ပါ တယ်။
ကိုေ ပါက် လက်ဆောင် အ တွေး ပါး ပါးလေး။
လိုတာပြောရရင် အလုပ်တစ်ခု၊ ကိုယ် လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုမှာ ပထမဆုံး လိုတာက
စိတ်ဝင်တစား လုပ်ချင်စိတ်ရယ်၊ စေတနာရယ်ပါ။
ပြီးမှ ကျွမ်းကျင်မှုရယ်၊ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်တို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးမှ ဝန်ဆောင်မှုကောင်း ပေးနိုင်တာပါ။
ပထမ အဆင့် လုပ်ချင်စိတ်ရယ် စေတနာရယ်တောင်မရှိဖူးဆိုရင်တော့ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းဆိုတာ ဖြစ်မလာတော့ပါဘူးးး
ဒီပို့(စ) ကောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
အများ အားဖြင့် က မ င်္ဂ လာ ပါ လို့ အ၀င် မှာ နုတ် ဆက် ပြ လိုက် ရင် အား လုံး လုံ လောက် သွားပြီ ထင် တာ လေ။
ဒီ ပိုစ် က နောက် တစ် ပိုင်း လာ ပါ အုံးမ ယ်.
စောင့် ဖတ် နော်။
၀န်ထမ်းရယ် ပိုင်ရှင်တွေရယ်ကြား ဂျာအေး သူ့အမေရိုက်တဲ့ ပြသနာ အရင်းခံပါ ။
အချိန်ရခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ မြင်မိတဲ့ အမြင်လေးကို ရေးချင်ပါသေးတယ် ။
ကို ထူး ဆန်း ရေး မှာ ကို မျှော် နေ ပါတယ်။
တ ကယ် တော့ ကျ နော် တို့ အ ကြောင်း အရာ တစ် ခု ကို ရေးကြ တယ် ဆို တာ ပုဏ္ဏား ဆင် စမ်း ပါ။
ကိုယ် မြင် တဲ့ အပိုင်း ကိုယ် ရေးကြ တာပါ။
အဲ တော့ နောက် တစ် ယောက် ရေး မယ် ဆို ရင် မ တူ သော အမြင် ဒေါင့် တွေ ထွက် လာ မယ်လေ။
ကျုပ်လည်း ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ပုဂံရောက်တော့ ဘူးဖေးဆိုင်မှာစားဖြစ်ပါတယ်…
နေ့ခင်းတစ်နာရီလောက်မှာကိုပဲ ဟင်းတွေက အေးစက်နေပြီး ခံတွင်းလည်းမတွေ့ခဲ့ပါဘူး..
ပိုဆိုးတာက ထမင်းမာတာပါ..ကျုပ်ကလည်းမာရင်စားမရ တော်တော်ဂွကျခဲ့ပါ၏။
အော်..ဆားဗစ်ကောင်း၏…….မကောင်း၏ ပေါ့ ကိုပေါက်ရေ
ခ ရီး သွား ရင်း စား ခဲ့ ရ သော အချို့ ဆိုင် များ ဟင်း သိုး တာကို ကြုံ ဘူး တော့ မြန် မာ ထ မင်း ဆိုင် ဆို လျင် မ စား ချင်
သို့ သော် ကောင်း သော ဆိုင် များ လည်းရှိ ပါ သည်။
အနော် ပုဂံရောက်တုန်းကဆို ဘူဖေးဆိုင်ကနေ ကံစမ်းမဲပေါက်ခဲ့လေရဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် အပြန်မှာ ထန်းတောထဲဝင်ပြီး တစ်မြူလောက်ဆွဲလိုက်တာ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အထက်လှန်အောက်လျှောဖြစ်ပါလေရော
အော် ထန်း ရည် အတု ကြောင့် များ လား ဗျ
ဲမြန်မာထမင်းဟင်းတွေက ပုံစံခွက်ထဲရောက်နေသလိုဖြစ်နေတာခက်တောပေါ့လေးပေါက်ရယ်။ ကျွန်မရေးခဲ့တဲ့ အစားအသောက်ပိုစ့်ထဲကလို လေးနာရီထက်ပိုထားလို့မရ၊ လေးနာရီအတွင်းစားရမယ်၊ အပူချိန် ၅ ဒီကရီကျော်ထားရမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိဘူး။ အဲတော့ ကျွန်မလဲ မြန်မာဆိုင်တွေတတ်နိုင် သလောက်ရှောင်မိတယ်။ ၀န်ဆောင်မှု့ဆိုတာကတော့ အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ပြောချင်တော့ပါ ဘူး လေးပေါက်ရယ်။ ဗေဒင်ယတြာနဲ့ပါတ်သက်လို့ပြောရရင်တော့ ၀န်ဆောင်မှု့လဲကောင်း၊ အချက်အပြုတ်လဲကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားတွေပါလာစားတဲ့ ရန်ကုန်က နာမည်ကြီးတွေထဲကတဆိုင်ဖြစ် တဲ့ မြန်မာထမင်းဆိုင်မှာ မနက်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ဟင်းပွဲတွေလဲစုံရော သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာဆိုတဲ့သူရောက် လာပြီး ဟင်းပွဲတွေရှေ့မှာ ရွတ်ဖတ်ပြီး ဂါထာတွေရွတ်လိုက်ဖွီဖွမ် ထွီထွမ်ဆိုပြီး မန်းမှုတ်လိုက်နဲ့ ဆိုတော့ ချက်ထားတဲ့ဟင်းထဲ သူ့တံတွေးတွေကျသွားတယ်လို့ထင်မိလို့ အဲနေ့ကစ ယနေ့ထိ သွားမစားတော့ပါဘူး။
မဟုတ် တာ တွေ ကို အ ဟုတ် လုပ် နေ တာ အ မှန် ပါ မွ သဲ ရေ
ဟင်း ပွဲ တွေ ရှေ့ ဂါ ထာ တွေ ရွတ် သ တဲ့ လား
အ ယူ လွဲ တွေ
လက်ခုတ် တီးပေးလိုက်ပါတယ် လေးပေါက်ရေ…
ဟုတ်ပါ့ဗျာ..။မြင်ရတွေ့ ရများလာတာတော့ အမှန်ပဲ…
၀န်ဆောင်မှုဆိုတာကို ပေါ့ပေါ့ပဲ ထင်ကြတယ်။
နာမည်ကြီးလာလေ မျက်နှာထားတွေ ပြောင်းလာလေပဲ။
ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ် လုပ်တာက သခင်စိတ်ဆိုပြီး ဖတ်ဖူးတယ်။
သခင်မျိုးဟေ့ …. လို့ အော်နိုင်အောင် လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကို အရင်ဆုံးပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်။
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ကိုယ့်တိုင်းပျီကို ဒီလောက်ဒေါင်
ကျုပ်တောင် ဘုရားသွားဖူးတာ အပြင်မှာဖိနပ်ချွတ်ခဲ့ဒါ
( ၃ ) ချက် ပေါ့နော် ။
၁ ။ ကိုယ့်ဖောက်သည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မှီအောင် မဖြည့်နိုင်တာ ။
၂ ။ အခွင့်အရေးရရင် ရသလို လှီးလိုက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ် ရှိနေတာ ။
၃ ။ ရောင်းကောင်းလာပြီဆိုရင် ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းကောင်း မပေးချင်တော့တာ ။
ကျနော် မကြာခဏ တွေ့ရတာ ( ၂ ) နှင့် ( ၃ ) ဗျ ။
အလုပ်ကို အလုပ်လို တိတိကျကျ လုပ်တာ လျော့လာတဲ့အချိန်မှာ
လုပ်ငန်းတာဝန် တိတိကျကျ ခွဲဝေမှု လျော့ရဲလာချိန်မှာ…
ယူအက်စ်မှာ.. ဘူဖေးဆိုင်တွေဆို.. လစ်ရင်လစ်သလို.. အစားအသောက်ဌာနက.. အန်ဒါကာဗာက..၀င်ဝင်စစ်သဗျ..။
အပူချိန်တိုင်းပြဒါးတိုင်လေးနဲ့.. အစားအသောက်ထဲထိုးထည့်လိုက်လို့.. သတ်မှတ်အပူချိန်မမှီရင်..ဒဏ်ငွေပဲ..။
အခုဘီလျှံနာဖြစ်နေတဲ့.. မြန်မာပြည်ပေါက်..အမျိုးသမီးဖွင့်တဲ့ ပန်င်ဒါအိပ်စ်ပရက်ဆိုင်တွေဆို.. ဘူဖေးထရေးထဲက..အစားအသောက်တွေ.. ခဏပဲအထားခံပြီး..နည်းနည်းခြောက်လာတာနဲ့လွှင့်ပစ်နေတာတွေ့ဖူးတယ်…။ လွန်ရော ၁နာရီလောက်ပဲထားတာ..။
Panda Express has 1,632 restaurants throughout the United States and Puerto Rico and is America’s fastest growing Chinese restaurant concept.
ကျ နော် တို့  နိုင် ငံ ကလူ တွေ က လုပ် သင့် လုပ် ထိုက် တာ ကို မသိ မ ဟုတ် သိ ကြ ပါ တယ်။
ဒါ ပေမ ယ့် အပေါ် ယံ ဆန်ဆန် ဘဲ လုပ် ကြ တယ်ေ လ။
လုပ် သင့် လုပ် ထိုက် တာ တွေ ကို လူ က မ လုပ် ဘဲ နံ ရံ နဲ့ ဆိုင်း ဘုတ် တွေ ပေါ် မှာ ဘဲ ရေး ထား ကြတာေ လ.။